Liiska Musharixiinta u Taagan Jagada Madaxtinimada Soomaaliya(Akhriso liiska) | Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
Liiska Musharixiinta u Taagan Jagada Madaxtinimada Soomaaliya(Akhriso liiska)
(Allssc) Waxaa markii ugu horeysay Shabakada Allssc.com ay heshay liiska musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada dawlada Soomaaliya ee illaa hadda liiskooda la soo gaarsiiyey xafiisyada ku shaqada leh, waxaana liiska uu gaarayaa illaa 25 musharax.
1) Dr C/raxman Maxamed Cabdi xaashi(Dhulbahante/Darood) Waa Aqoonyahayn heysta derejada Dr waxna ku soo bartey USA
Wuxuu ka soo jeedaa qoys caan ku ah talada, waa wadani somaliyeed oo doonaya in uu shaqeeyo Umada Somaliyeed.
Wuxuu dhawaan muqdisho kaga dhawaaqey musharaxnimadiisa .
2) Shariif Sheekh Axmed- (Beesha Agoon yar, Abgaal). Waa madaxweynaha DKMG ah ee hadda xafiiska jooga. Sheekh Shariif wuxuu saameyn toos ah ku leeyahay 135 oday dhaqameed ee ku shirsan Muqdisho, waxaana laga yaabaa in saameyn uu ku yeesho xubnaha baarlamaanka cusub.
Taageerayaashiisa gudaha wuxuu ugu kalsoon yahay kooxda AALA SHEEKH oo la filayo inay tiro fiican baarlamaanka cusub ku yeelan doonaan. Rajo weyn ayuu Shariifku ka qabaa inuu mar labaad ku soo laabto xafiiska Villa Soomaaliya, sida ka muuqata ololihiisa marar badana uu ka sheegay fagaarayaal.
3) Shariif Xasan Sheekh Aadan - (ASharaaf/Digil). Wuxuu ahaa wasiir maaliyadeed xilligii Cumar C/rashiid, wuxuuna markii dambe noqday gudoomiyihii baarlamaanka May 2010- Disembar 2012.
Shariif Xadan wuxuu si weyn ugu dhex jiraa arimaha odayaasha dhaqanka, baarlamaanka cusubna waa looga cabsi qabaa. Hami weyn ayaa uga jira kursiga madaxtinimada waana sababtaas mida kala geysay isaga iyo saaxiibkiis Sheekh Shariif.
4) Prof C/weli Maxamed Cali Gaas- (Cumar Maxamuud/Majeerteen). C/weli Gaas waxaa uu siyaasada dalka ku soo biiray xilligii xukuumaddii Farmaajo, Bishii June 2011 ayaana loo magacaabay raysul wasaaraha dalka. Hamigiisa tartanka doorashada waa mid cusub oo soo baxay in ku siman usbuucyo kaliya, waxaase la sheegayaa in la taliyaashiisa ku dhiirgaliyeen inuu tartamo.
Prof. C/weli Gaas taageerada ugu badan wuxuu ka filayaa dhanka Puntland. Waxaase jira wadamo qaar oo uu saaxiibtinimo la leeyahay oo laga yaabo inay iyaguna taageeradooda siiyaan.
5) Dr. C/raxmaan Maxamed C/laahi Baadiyow- (Wacaysle/ Abgaal). Wuxuu ka yimid Canada. Wuxuu ka tirsan yahay illaa hadda guddiga sare ee maamulka Jaamacadda Muqdisho.
6) Maxamed C/laahi Farmaajo- (Mareexaan). Sanadkii uu raysul wasaaraha ahaa ayaa Farmaajo la sheegay inuu noqday ninkii ugu horeeyay ee dhaqaajiyey shaqada xukuumadda fadhiidka ahayd ee DKMG. Waxaa lagu xusuustaa markii uu xilka ka dagay bannaanbaxyadii waaweynaa gudaha iyo dibadda ka dhacay, waxaana loo arkaa nin rumeysan mabda’a qowmiyadeynta ama wadaniyad.
7) Xasan Sheekh Maxamuud- (Wacaysle/ Abgaal). Wuxuu hogaamiyaa Xisbiga Nabadda iyo Horumarka ‘PDP’. Xasan wuxuu ka mid yahay qurbejoogta ka soo laabatay Canada. Wuxuu mudo dheer ahaa madaxa Jaamacada SIMAD, waana aas aasihii Jaamacadda. Waana nin furfuran.
8) Maslax Maxamed Siyaad- (Mareexaan/ Daarood). Waa wiil uu dhakay madaxweynihii dawladii militariga ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. Maslax wuxuu ka mid ahaa taliyaashii ciidanka Soomaaliya sanadihii uu aabihiis xukunka hayey. Doorashadii madaxtinimada DKMG Soomaaliya ee Jabuuti ka dhacday Janaayo 2009 ayuu u tartamay Maslax, hase yeeshee ma guuleysan.
Maslax Maxamed Siyaad wuxuu ololihiisa hadda ka wadaa Nairobi oo uu degan yahay, welina ma uusan iman Muqdisho laakiin xiriiro ayuu la leeahay gudaha.
9)- C/laahi Axmed Cadow- (Sacad/Habargidir). Wuxuu ka mid ahaa musharixiintii la tartantay Marxuum C/laahi Yuusuf sanadkii 2004 doorashadii ka dhacday Nairobi. Sanadkii 2000 wuxuu ahaa musharaxa kaliya ee wareega labaad la gaara C/qaasim Salaad Xasan oo markii dambe ku guuleystay madaxweynaha DKMG Soomaaliya. Wuxuu diblomaasi ka noqday safaaradda Soomaaliya ee Qaramada Midoobay, marna wasiir arimo dibadeed ayuu noqday.
10) Prof Axmed Ismaaciil Samatar- (Samaroon/Dir). Wuxuu ku tartamayaa xisbiga Hiil Qaran oo ah gole ay ku mideysan yihiin qurbejoog iyo gude joogto Soomaali ah. Waxay hadda xafiis ka furteen Muqdisho. Samatar laftiisa wuxuu ka soo laabtay Minnesota, Mareykanka oo uu macalin jaamacadeed ka ahaa.
11) C/raxmaan C/Shakuur Warsame- (Cayr/Habargidir). Wuxuu xildhibaanimada ka soo galay baarlamaankii la balaariyey ee Jabuuti lagu sameeyay 2009. Ka horna wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenkii Isbahaysigii Dib u Xoreynta ee Asmara iyo Midowgii Maxkamadaha Islaamiga. Wuxuu degan yahay London.
12) Cumar Sowjar- (Leelkase) Cumar waxa uu yahay Xoghayaha Guud Golaha Midowga Qurbajoogta Soomaaliyeed waxa uuna kamid ahaa aasaasayaashii Ururweynihii Midnimo waa Siyaasi qunyar socod ah waxa uu inmudo ah kunoolaa Wadanka Mareykanka Gaarahaan Gobolka Colorado.
13) Siciid Ciise Maxamuud- (Cayr/Habargidir). Wuxuu wataa Xisbiga ‘DADKA’ oo laga yagleeyay Muqdisho. Wuxuu ololihiisa ka wadaa Nairobi, dhowaana wuxuu tagay Guriceel iyo Dhuusamareeb.
14) Dr Xuseen Khaliif Xaaji Jamac- (Cumar Maxamuud/Majeerteen) Mudo dheer ayuu deganaa Sacuudi Carabiya, wuxuuna maamul ka qabtay Baanka Islaamka. Waa nin Mutacalin Dalalka East Africana Ganacsi Ku Leh.
15) Jaamac Cali Jaamac- (Cismaan Maxamuud/Majeerteen). Wuxuu sanadkii 2002 madaxweyne ka noqday maamul goboleedka Puntland, waana Colonel hore. Weli waa xildhibaan ka tiraan baarlamaanka Soomaaliya. wuxuu dhowaan isku sharaxay dalka Sweden.
16) Yaasiin Maaxi Macalim- (Abgaal). Waa ninka ugu dhalinta yar musharixiinta illaa hadda isa soo taagay. Waxaa loo arkaa siyaasi aan saameyn badan lahayn.
17) Prof Axmed Muumin Warfaa- (Xawaadle/Hawiye). Mudo dheer ayuu hormuud ka ahaa jaamacadii Ummada Soomaaliyeed ee Muqdisho. Wuxuu ka mid yahay aqoonyahanada tirada yar ee ku takhasusay cilmiga beeraha.
18) Prof Maxamed C/weli- (Fiqi Maxamed/Dir). Wuxuu ka mid yahay qurbejoogta Soomaalida ee sheegtay inay u sharaxan yihiin doorashada.
19) C/laahi Sheekh Xasan- (Wacbuudhan/Abgaal). Wuxuu mar gacanyare u ahaa hogaamiye kooxeedka Muuse Suudi Yalaxow, kadibna wuxuu la xirtay hogaamiye kooxeedka Cumar Finish oo ay qaraabo yihiin.
20) Cumar Salaad Cilmi- (Sacad/Habargidir). Wuxuu ka yimid Ingiriiska.
21) Maxamed Maxamuud Guuleed ‘Gacmadheere’- (Saleebaan/Habargidir). Waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka KMG ah. Sanadkii 2000 wuxuu ku tartamay doorashadii ka dhacday Jabuuti. Dawladii KMG ee Nairobi lagu soo dhisayna xilal wasiirnimo ayuu ka qabtay gaar ahaan wasaarada arimaha gudaha, waxaana lagu xusuustaa markii uu amray in laga guuro qeybo ka mid ah koonfurta Muqdisho oo ay duqeeyeen ciidamadii Ethiopia dad badana ku dhinteen.
22) C/raxmaan Xaaji Cabdulle ‘Ibcad’
23) Cali Macalim Maxamed Aadan ‘Guuriye’
24) C/qaadir Xaashi Cali ‘Fishi’
25) Maxamed Cismaan Gacal ‘John’
26) Sheekh C/raxmaan Xaaji Dabcasar.
Short URL: http://allssc.com/?p=33702
You can leave a response or trackback to this entry	1 Comment for “Liiska Musharixiinta u Taagan Jagada Madaxtinimada Soomaaliya(Akhriso liiska)”
ubax	July 11, 2012 - 9:10 am	yaasin ibraahim cise darmaan waanu ku dooraney madaxweynah somalia
welcome to somalia gacmo furen iyo niyad saafi ah ku soo dhowow
ani ku hadlaya magac dhalin yarada somaliyeed meel walboy jogaan
waxaanu ku siiney codkayaga adiganu kuu dooraney madaxweynah somalia
viv somali weyn
viv madaxweyne daacad ah